Ụlọ Nche (Nke A Na-amụ Amụ) | Septemba 15, 2004
GỤỌ NKE Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Czech Danish Dutch English Ewe Ga German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Korean Lithuanian Malagasy Mizo Portuguese Romanian Setswana Shona Silozi Slovak Slovenian Swahili Tsonga Turkish Ukrainian
N’ihi gịnị ka e ji kwe ka ndị ikom Izrel lụọ ndị inyom ala ọzọ a dọtara n’agha ebe Iwu Mozis kwuru na a gaghị eso ndị ala ọzọ ụfọdụ alụrịta di na nwunye?—Deuterọnọmi 7:1-3; 21:10, 11.
Ọ bụ n’ihi ọnọdụ ndị pụrụ iche ka e ji nye ohere maka nke a. Jehova enyewo ụmụ Izrel iwu ibibi obodo nile nke mba asaa dị n’ala Kenan, na-egbu ndị nile bi n’ime ha. (Deuterọnọmi 20:15-18) N’ihe banyere mba ndị ọzọ, nanị ndị toro eto o yiri ka hà ga-alanarị bụ ndị inyom na-amaghị nwoke bụ́ ndị a dọtara n’agha. (Ọnụ Ọgụgụ 31:17, 18; Deuterọnọmi 20:14) Onye Izrel pụrụ ịlụ nwanyị dị otú ahụ nanị ma ọ bụrụ na nwanyị ahụ ewere nzọụkwụ ụfọdụ.
Banyere nzọụkwụ ndị a chọrọ n’aka nwanyị dị otú ahụ, Bible na-ekwu, sị: “Ọ ga-akọpụkwa isi ya, mezie mbọ aka ya, yipụ uwe ndọta n’agha ya n’ahụ́ ya, nọdụ n’ụlọ gị, kwaara nna ya na nne ya ogologo otu ọnwa: e mesịa, ị ga-abakwuru ya, wee ghọọrọ ya di, o wee ghọọrọ gị nwunye.”—Deuterọnọmi 21:12, 13.
Nwanyị na-amaghị nwoke nke a dọtara n’agha bụ́ onye onye Izrel chọrọ ịlụ aghaghị ịkọpụ isi ya. Ịkpụ isi na-egosi iru újú ma ọ bụ ahụhụ. (Aịsaịa 3:24) Dị ka ihe atụ, mgbe ụmụ na ihe onwunwe nile nke nna ochie bụ́ Job funahụrụ ya, ọ kpụrụ isi ya dị ka ihe àmà nke iru újú. (Job 1:20) Nwanyị ala ọzọ ahụ aghaghịkwa imezi mbọ aka ya, eleghị anya ‘na-ebe mbọ aka ya’ ka ọ ga-abụ a sịgodị na o tee ha ihe, aka ya agaghị na-adọrọ adọrọ. (Deuterọnọmi 21:12, Knox) Gịnị bụ “uwe ndọta n’agha ya” nke nwanyị ahụ a dọtara n’agha na-aghaghị iyipụ? Ndị inyom nke obodo ndị Kenan bụ́ ndị a na-aga ịdọrọ n’agha na-eyirikarị uwe ha ndị kasị mma. Ha na-eme nke a n’olileanya nke na ha ga-enweta ihu ọma nke ndị ga-adọrọ ha n’agha. Nwanyị a dọọrọ n’agha nke na-eru újú aghaghị iyipụ uwe dị otú ahụ.
Nwanyị a dọọrọ n’agha nke ga-abụ nwunye onye Izrel ga-eruru ndị ọ hụrụ n’anya nwụrụ anwụ újú ruo otu ọnwa. A ga-ebibi obodo nile nke ndị Kenan kpamkpam nke na ọ dịghịzi ihe ga-ejikọ nwanyị ahụ na ndị ezinụlọ ya na ndị obodo ya. Ebe ọ bụ na ndị agha Izrel ebibiwo ihe oyiyi nke chi ya, ihe ndị nwanyị ahụ ji efe ofufe adịghịzi. Ọnwa ahụ o ji ruo újú bụkwa oge e ji mee ka ọ dị ọcha, bụ́ oge nwanyị ahụ a dọtara n’agha ga-enwere onwe ya pụọ n’ihe nile gbasara ofufe ochie ya.
Otú ọ dị, nke a dị iche n’ebe ndị inyom ala ọzọ n’ozuzu ha nọ. Banyere nke a, Jehova nyere iwu, sị: “Gị na ha alụrịtakwala nwunye; enyela nwa ya nwoke nwa gị nwanyị, ekurukwala nwa ya nwanyị nye nwa gị nwoke.” (Deuterọnọmi 7:3) Gịnị mere e ji gbochie ha ime nke a? Deuterọnọmi 7:4 na-ekwu, sị: “N’ihi na ọ ga-ewezuga nwa gị nwoke n’iso m n’azụ, ka ha wee fee chi ọzọ.” Ya mere, mmachibido ahụ bụ iji chebe ụmụ Izrel pụọ ná ngwagbu nke ofufe ha. Otú ọ dị, nwanyị ala ọzọ nke nọ n’ọnọdụ ahụ a kọwara na Deuterọnọmi 21:10-13 abụghị ihe iyi egwu. Ndị ikwu ya nile anwụchaala, e bibisiwokwa ihe oyiyi nke chi ya. Ya na ndị na-efe ofufe ụgha enweghịzi mmekọ. Onye Izrel pụrụ ịlụ nwanyị ala ọzọ nọ n’ọnọdụ dị otú ahụ.
“Kpeenụ Ekpere Otú A”
Ekpere Onyenwe Anyị—Ihe Ọ Pụtara Nye Gị
“Njupụta nke Oké Osimiri Nile”
“Nọgidenụ Na-enweta Ike N’ime Onyenwe Anyị”
“Yikwasịnụ Ekike Agha Zuru Ezu nke Sitere Na Chineke”
Ihe Igwe Ihe Ndị Na-emepụta Nri
Isi Ihe Ndị Sitere n’Akwụkwọ Deuterọnọmi
Ịtụle Akụ̀ Ndị Dị Oké Ọnụ Ahịa nke Chester Beatty
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Septemba 15, 2004
ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Septemba 15, 2004